Yeremia 12 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
12 O Yehowa, sɛ meka m’asɛm kyerɛ wo a, wubu atɛn wɔ trenee mu.+ Sɛ mede me nsɛm dan wo a, wudi ma me. Dɛn nti na abɔnefo kwan si wɔn yiye+ na nkontompofo nyinaa nso ho dwo wɔn? 2 Woadua wɔn na wɔagye ntini. Wɔanyin na wɔasow aba nso. Wɔde wɔn ano na ɛbɛn wo, nanso wɔn asaabo de, ɛne wo ntam ware yiye.+ 3 O Yehowa, wo na wunim me yiye;+ wuhu me, na woasɔ me koma ahwɛ sɛ edi mũ w’anim.+ Yiyi wɔn gyina nkyɛn sɛ nguan a wɔrekokum wɔn,+ na hyira wɔn so ma okum da. 4 Asase no bɛsɛe akosi da bɛn,+ na asase no so wura betwintwam akosi da bɛn?+ Wɔn a wɔte so no bɔne nti, mmoa ne nnomaa aguan kɔ.+ Na wɔka sɛ: “Ɔrenhu yɛn awiei.” 5 Sɛ wo ne anammɔnfo tu mmirika na wobrɛ a, ɛnde ɛbɛyɛ dɛn na woatumi ne apɔnkɔ atu mmirika?+ Asomdwoe asase so na woanya awerɛhyem yi?+ Ɛnde wobɛyɛ dɛn wɔ Yordan kwaebirentuw no mu?+ 6 W’ankasa wo nuanom ne wo papa fiefo mpo atwa wo nkontompo.+ Wɔn mpo teɛm denneennen di w’akyi. Na sɛ wɔka nsɛm a ɛyɛ dɛ kyerɛ wo a, nnye wɔn nni.+ 7 “Magyaw me fie;+ mapo m’agyapade;+ mede nea me kra dɔ no no ahyɛ n’atamfo nsa.+ 8 M’agyapade adan me sɛ gyata wɔ kwae mu. Wama ne nne so atia me. Ɛno nti na metan no no.+ 9 M’agyapade+ adan me sɛ ɔkɔre ntokontrama; akɔre atwa ho ahyia.+ Wuram mmoa nyinaa, mommoaboa mo ano mmra; momfa wɔn mmra mmedidi.+ 10 Nguanhwɛfo+ bebree asɛe me bobeturo no;+ wɔatiatia me kyɛfa no so.+ Wɔadan me kyɛfa a mepɛ+ no sare so amamfõ. 11 Wɔayɛ no amamfõ;+ atwintwam; adan amamfõ ama me.+ Wɔayɛ asase no nyinaa amamfõ, efisɛ obiara nni hɔ a ɔde ahyɛ ne komam.+ 12 Asɛefo aba sare so kwan no nyinaa so. Yehowa nkrante resɛe ade fi asase no ano akosi ano nohoa.+ Asomdwoe bi nni hɔ mma ɔhonam biara. 13 Woduaa awi nanso nsɔe na wɔatwa.+ Wɔayɛ adwuma ama abɔ wɔn yare, nanso wɔannya so mfaso biara.+ Yehowa abufuhyew nti wɔn ani bewu wɔn nnɔbae ho.” 14 Nea Yehowa aka ni: “Nnipa abɔnefo a wɔte bɛn+ me a wɔde wɔn nsa aka agyapade a mede ama me man Israel sɛ wɔmfa no nyinaa,+ meretutu wɔn ase afi wɔn asase so,+ na Yuda fie nso, metu ase afi wɔn mu.+ 15 Na sɛ mitu wɔn ase wie a, mehu wɔn mmɔbɔ+ na masan de wɔn aba na obiara akɔ n’agyapade ne n’asase so.”+ 16 “Na sɛ wobesua me man akwan yiye na wɔaka me din ntam sɛ,+ ‘Sɛ́ Yehowa te ase yi!’ sɛnea wɔkyerɛɛ me man sɛ wɔnka Baal ntam+ no a, ɛnde wɔn nso wobenya tenabea me man mu.+ 17 Na sɛ wɔantie a, ɛnde me nso metutu saa ɔman no ase; metutu ase na masɛe no,”+ Yehowa asɛm ni.